1 Olee otú iji FaceTime na iPad – download FaceTime maka iPad FaceTime na iPad-adịghị arụ ọrụ
3 Ultimate Guide Malite FaceTime na iPad:
4 Tụgharịa na Face Time Njirimara na gị na m Kedo akwa:
5 Jiri Face Time Call On iPad:
5.1 Pịa na Face Time icon:
5.1.1 Chọpụta gị choro Kpọtụrụ:
6 Ozi kọntaktị Panel
6.0.1 Ebe video ma ọ bụ ọdịyo na oku na-ahọrọ na kọntaktị:
Olee otú iji FaceTime na iPad – download FaceTime maka iPad FaceTime na iPad-adịghị arụ ọrụ
Apple ka mgbe me ihe kasị mma maka ndị ahịa. Ọ nwere nọgidere mesiri ike ẹkedori ndị ngwa ma ọ bụ software na-eme ka obi ụtọ na mma ka ya ahịa. Mmetụta nke na-elekọta mmadụ mgbasa ozi oke adịkwu.
download FaceTime maka ipad
FaceTime download maka ipad
FaceTime maka apple ipad
FaceTime maka android iPad
FaceTime ngwa n'ihi na ipad download
People of bụla afọ chọrọ ịnọ Associated na onye ọ bụla ọzọ. N'ihi nke a, Apple pụrụ iche a fabulous videotelephony ngwa maara dị ka FaceTime maka ndị ahịa.
Nke a na-eji ngwa na-nanị e maka niile Apple ọrụ iji iPhone, Mac, iPod, na iPad. N'etiti ndị niile ọzọ ngwaọrụ nke Apple, ndị mmadụ n'anya na-eji iPad. Ya wider ihuenyo na ezi mma n'ihi ekwe ka ndị ahịa na-enwe ya atụmatụ na égwu nnọọ ịrịba ama dị ka tụnyere ndị ọzọ ngwaọrụ.
Ị nwere ike iji FaceTime na iPad nwere a wider na-ele gị video oku na-aga. Isiokwu a ga-agwa gị na-omimi pụtara, nbudata, echichi, ojiji, na atụmatụ nke Face Oge maka iPad.
FaceTime bụ ihe ịtụnanya video na ọdịyo ọkpụkpọ na ngwa na-na-na mbụ kere iPhone4, ma elu ina manyere Apple-eme ka ọ dị maka iPad ọrụ dị ka nke ọma. iPad na-enye gị dị iche iche ma otu n'ime ihe ndị kasị mma atụmatụ bụ na ị nwere ike mfe etinye video ma ọ bụ ọdịyo oku site FaceTime.
Ị nwere ike iji Face Time na-interconnected ọzọ ọrụ onye nwere ihe iPad na MAC OS 10.6.6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị. Ị dị nnọọ nwere na-ahụ na onye site ya Apple NJ. The video na audio oku site FaceTime nnọọ free. Ị nwere ike iji gị njikọ Ịntanetị ma ọ bụ cellular data-amalite ịtụkwasị oku.
FaceTime ngwa n'ezie zubere maka iOS ọrụ gụnyere iPhone, iPads, iPods, na Mac. Nke a ngwa-enye gị ohere na-akpọ mgbe ị na-anọghị gị na ezinụlọ gị, enyi, azụmahịa, na ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ iji nke a ọwọrọiso videotelephony ngwa gị iPad, mgbe echegbula ị na-adịghị eme ihe ọ bụla. Apple esesịn arụnyere na FaceTime ngwa gị iPads.
Ị dị nnọọ mkpa gị Apple ID iji rụọ ọrụ a tupu arụnyere FaceTime ngwa gị iPads. Nke a ga-akpali n'ihi na ị mara na ozugbo na ị nwere gị iPad, ị dị njikere ime ka elu-edu video ma ọ bụ ọdịyo oku site FaceTime enweghị ihe ọ bụla hassles ma ọ bụ ogologo usoro nke nbudata.
Site n'enyemaka nke FaceTime na iPads, ị nwere ike mfe ime ma ọ bụ na-enweta na-akparaghị ókè video na audio oku. Dị ka nke a na-eji ngwa bụ maka iOS ọrụ naanị, otú i nwere ike na-eme video ma ọ bụ telephony oku ndị ọrụ ndị na-eji iPhone, Mac, iPod, na iPad ngwaọrụ. Ị nwere ike na-etinye a oku ka iPad ọrụ site na iji ha email id na bụ a dị na kọntaktị na ndepụta.
Ultimate Guide Malite FaceTime na iPad:
iPad 2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nwere na-wuru igwefoto na mmemmem gị kụziere gị video akpọ site FaceTime. Nke a mmekọrịta ngwa na-ahapụ ị na-agwa gị ndị ha hụrụ n'anya mgbe ị na-na anya site n'ebe ha.
Face Time site iPad na-enye gị niile a ma ama na atụmatụ ma ị nwere ike ghara ịgbanwe ya olu si ya ngwa na-i nwere ike ime ndekọ nke gị video oku. ma, ka, ọ na-enye ndị ọzọ nile bara uru atụmatụ na-eme ka ọ mpi iji.
Tụgharịa na Face Time Njirimara na gị na m Kedo akwa:
The ihe kasị mkpa bụ, n'ihu iji Face Time gị iPads, jide n'aka na ị agbanyela tupu arụnyere Face Time feature, i nwere ike ime nke a site:
Gaa na ọnọdụ menu nke dị na Home Page gị iPad.
mgbe, pịa na Face Time mma ka ọ rụọ ọrụ.
I nwekwara ike na-agbaso otu usoro ma ọ bụrụ na ị chọrọ nwa oge gbanyụọ atụmatụ gị iPad.
Ke idaha menu nke gị iPad, ị nwekwara ike họrọ ndepụta na kọntaktị niile na ị chọrọ ka jikọrọ site FaceTime. I nwere ike ime nke a site na-ahọpụta ha e-mail adreesị na ekwentị akụkọ.
Jiri Face Time Call On iPad:
I nwere ike na-edebe oku site na gị FaceTime ọzọ Apple ngwaọrụ ọrụ. Nke a pụtara na ị nwere ike ina interlinked site Face Time na ndị ọrụ ndị ọzọ ndị na-eji
iPad 2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ma ọ bụ
Mac na-agba ọsọ OS X 10.6.6 ma ọ bụ
iPhone4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị ma ọ bụ
Fourth-emana iPod aka ma ọ bụ mgbe e mesịrị
Tupu na-akpọ ihe ọ bụla nke Apple ngwaọrụ ọrụ, jide n'aka na ị kwukwara ya na iPad kọntaktị. Ịtụkwasị a video ma ọ bụ ọdịyo na oku site na gị iPad bụ awfully mfe. Ị dị nnọọ nwere na-eso ole na ole nzọụkwụ tinyere.
Pịa na Face Time icon:
Dị ka anyị tụlere na mbụ, Face Time bụ a tupu arụnyere mma na gị iPads. Ị nwere ike mfe ịchọta ya na akara ngosi na home ihuenyo gị iPads. Mgbe ị ga-pịa na Face Time icon, ọ ga-ajụ gị na-enye ndị chọrọ data.
Ị na-azọrọ na-abanye na-e-mail id na nọmba ekwentị na onye ị chọrọ na-amalite mkparịta ụka. Mgbe na-eru ndị chọrọ kọntaktị, nnọọ na ị nwere pịa na button na-esote.
Chọpụta gị choro Kpọtụrụ:
Na isi ihuenyo gị FaceTime ngwa, ị ga-ahụ ndepụta nke na kọntaktị ga-egosi na n'akụkụ aka nri nke gị na ihuenyo. Mgbe ị ga-ahụ na akaụntụ nke a ọrụ na ị chọrọ kpọtụrụ, dị nnọọ pịa ya ma ọ bụ ya aha.
Site na ịpị aha ya, ị nwere ike nweta niile ozi dị mkpa nke na ọrụ. The ndepụta na-egosi ya n'ụlọ nọmba, nọmba ekwentị mkpanaka, email address na ndị ọzọ na nhọrọ dị ka òkè kọntaktị, Tinye ka ọkacha mmasị na-egbochi nke a bere.
Ozi kọntaktị Panel
Ebe video ma ọ bụ ọdịyo na oku na-ahọrọ na kọntaktị:
Ozugbo ị ga-eru ihe ọmụma nke ahụ ọrụ, nnọọ na ị ga-echekwa ya ma ọ bụ ya nọmba ma ọ bụ email- address. Ị ga naanị chekwaa ihe ọmụma nke bụ ofu-jikọtara Face Oge.
Mgbe mmekọrịta nke achọrọ data, nnọọ na ị nwere pịa na button of video ma ọ bụ ọdịyo na oku. Na ike na-enwe otu n'ime ndị kasị hụrụ n'anya video akpọ ọrụ nke ụwa.
N'ihi ya ugbu a ozi na-enyere gị na-amalite na-eme ka FaceTime na iPad nke bụ mfe ọrụ ime na gị onwe gị. M na-atụ nkọwa nyeere gị jikọọ na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ. Do share with your friends and families so that they can also know the use of Face Time on iPad.